Dean Henderson oo dalbanaya in uu ka tago kooxda Manchester United
Home Horyaalka Ingiriiska Dean Henderson oo dalbanaya in uu ka tago kooxda Manchester United
Dean Henderson ayaa lagu soo waramayaa inuu dalban doono inuu ka tago Manchester United hadii aan loo damaanad qaadin maaliyada koowaad ee xilli ciyaareedka 2021-22.
23 jirkaan ayaa ku riyaaqay labo sano oo guulo amaah ah oo uu kula joogay Sheffield United wuxuuna u ciyaaray Blades xilli ciyaareedkoodii cajiibka ahaa ee 2019-20, laakiin wuxuu ku dhibtooday inuu ka helo boos United.
Xaqiiqdii, Henderson wuxuu ciyaaray kaliya 12 kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan – seddex ka mid ah Premier League – waxaana la sheegay inuu ku jahwareeray inuu ciyaaro booska labaad ee David de Gea .
Sida laga soo xigtay Manchester Evening News , ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa sidaas darteed ku wajahan albaabka laga baxo ee Old Trafford haddii Ole Gunnar Solskjaer uusan ka dhigin goolhayihiisa dookha koowaad ee xilli ciyaareedka soo socda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in hadii kooxda aysan cunaqabateyn ka saarin bixitaanka Henderson, inay weydiisan doonaan cid kasta oo dooneysa inay ka iibiso 40 milyan ginni, iyadoo Tottenham Hotspur , Chelsea iyo West Ham United dhamaantood la rumeysan yahay inay isha ku hayaan xaalada.
Goolhayaha ayaa qalinka ku duugay heshiis kordhin uu Red Devils kula sii joogayo ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2024-25 xagaagii hore.
Previous articleDaafaca Liverpool Andy Robertson oo ka hadlay wararka sheegaya in qolka labiska ay isku dagaaleen Alisson Becker
Next articleErling Braut Haaland oo xiiseenaya ku biirista mid kamid ah Kooxaha Premier League